Aleo miova tsy ho azon-doza | NewsMada
Rehefa ny tsirairay no tsy afaka hiova, zava-poana ihany ny ezaka rehetra ataon’ny manampahefana handaminana ny tanàna. Mbola ho tsentsina ihany ny tatatra, mbola hitohana ihany ny fifamoivoizana, mbola ho feno diky ihany ny sisin-dalamby sy ny lobolobo rehetra… Matetika, tahotra ny sazy ihany ny mahatonga ny olona hanaja ny fitsipika ka miverina ny fomba fanao rehefa mangingina ny mpiambina. Efa novoizina teto ny « Rehefa tsy mandoto dia manadio » fa mbola miparitaka manerana ny sisin-dalana ihany ny potipoti-javatra sy ny loto navelan’ny mpivarotra hani-masaka. Rehefa hoesorina anefa, mimenomenona, milaza fa « manao kely tsy mba mamindro », “aiza izahay no hivarotra”, sns… Efa kolontsaina raiki-tampisaka mihitsy ny fandikan-dalàna sy ny tsy fanajana fitsipika satria mifantsika ao an-tsaina hatrany ny hoe: eto ny fitadiavana, na efa omena toerana tsara ivarotana aza.
Rehefa ny tsirairay no tsy afaka hiova, lazaina fa manao didiko fe lehibe izay mitondra zava-baovao handaminana tanàna… Ny fanorenana tsy nahazoana alalana amin’ny toerana mety hitera-doza, ohatra, ny eny ambanin’ny vatobe sy ny amoron-tatatra. Rehefa tonga ny fahavaratra, malemy ny tany, mihotsaka izay tsy hihotsaka, tandindonin-doza ary mety hiafara amin’ny famoizana aina mihitsy izany, toy ireo nitranga teny amin’ny toerana avo, indray taona izay. Ny hafa indray no sarotiny amin’ny aintsika, rehefa iharan-doza vao tonga saina…
Rehefa ny tsirairay no miova, mirindra ny fiarahamonina, “samy salama ny reny sy ny zaza”, hitsoaka lavitra antsika ny aretina, toy ny pesta, sns… “Antananarivo madio no tanjona ka tadidio”, hoy ny teny filamatra nataon’izay olona izay. Rehefa mby ao an-tsain’ny isam-batan’olona ny hoe manaiky alamina, hitandro ny manodidina, izay no voaloham-pandrosoana. Indrindra ny fahatsapana fa tsy tahotra ho voasazy ny hanarahana fitsipika fa noho ny tombontsoa iombonana, izay no maha olom-banona.